Ciidamo Itoobiyaan ah iyo Macawiisley oo dagaalamay; khasaaro jira
By WARIYAHA BELEDWEYNE , GAROWE ONLINE
Isku dhacaan ayaa ah midkii ugu horeeyay oo noociisa oo labada dhinac maray.
BELEDWAYNE, Hiiraan – Tafaasiil dheeri ah ayaa kasoo baxeysa dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay oo tuulada Af-qurun ee duleedka degaanka Far-libaax, gobolka Hiiraan ku dhexmaray Itoobiya iyo Macawiisley.
Illaa iyo haatan ma cadda sababta keentay isku dhaca labada dhinac oo lasoo wariyey fiidnimadii xalay oo Arbaco ahayd.
Wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamadda Itoobiyaanka ah "oo baxsad ahaa" ay ka yimaadeen magaalada Xudur ee gobolka Bakool.
Inta la xaqiijiyey 20 labada dhinac ah ayaa ku geeriyootay, halka tirro intaas ka badan ay dhaawacyo kasoo gaareen.
Maxamed Cali Istakiin, oo isku sheegay taliyaha Macawiisley, ayaa xaqiijiyey in waxyeelo ay dhankooda soo gaartay.
"Ciidamaddaas oo ka careysanaa taliyihii hogaaminayey waxay doonayeen in ay u talaabaan xadka Dowlad degaanka Soomaalida," ayuu Istakiin u sheegay warbaahinta maxaliga ah ee magaalada Muqdisho.
Dhanka kale, ma jiro wax war ah oo ku saabsan iska hor-imaadka oo kasoo baxay dhanka ciidamadda Itoobiya ee qaybta ka ah AMISOM.
Dagaalkaan ayaa noqonaya midkii ugu horeeyay oo noociisa ah ee dhexmara ciidamo shisheeye iyo Macawiisleyda gobolka Hiiraan oo horey looga bartay in ay la diriraan maleeyshiyaadka hubeysan ee Al-Shabaab.
Amiir ay Al-Shabaab ku bedeshay sarkaal la dilay oo isana la khaarijiyey
Soomaliya 05.03.2020. 15:01
Dagaal ay kooxdu la gashay Macawiisleyda ayaa la tilmaamay in lagu toogtay sarkaalka.
DF oo lagu dhaliilay inay taageeri wayday kooxda Macawiisley
Soomaliya 03.10.2018. 21:26
Lacagta ay Shabaab sanadkii ka hesho halkii “isbaaro" oo la shaaciyey
Soomaliya 08.02.2020. 16:00
Mareykanka oo dabciyey mowqifkiisa maamulka Axmed Madoobe
Soomaliya 06.02.2020. 06:33
Soomaliya 11.05.2018. 18:34